Department of Health and Human Services Victoria | Coronavirus (COVID-19) - ျမန္မာ
ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် ပြောင်းလဲမှုများ အတိုချုပ်
အကယ်၍ သင် စိုးရိမ်ပူပန်နေလျှင် coronavirus တိုက်ရိုက်ဖုန်းလိုင်း 1800 675 398 (၂၄ နာရီလုံး) ကို ခေါ်ပါ။.
အကယ်၍ သင် စကားပြန်တစ်ဦး အလိုရှိလျှင် TIS National ကိုဖုန်း 131 450 ဖြင့်ခေါ်ပါ။.
ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းနံပါတ် သုညသုံးလုံး (000) ကို အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်သာ သုံးပါ.
သင် အိမ်မှအပြင်ထွက်သည့်အခါ နှာခေါင်းစည်းကို ဝတ်ရမည်။
အခြားသူများမှ အနည်းဆုံး ၁.၅ မီတာ စိတ်ချရသည့်အကွာအဝေး၌ နေပါ။
သင့်လက်များကို မကြာခဏ ဆေးကြောပါ။
သင် နေထိုင်မကောင်းလျှင် အိမ်၌နေပါ။ အလုပ် မသွားပါနှင့်။
တစ်ရှူးထဲ သို့မဟုတ် သင့် လက်တံတောင်ကွေးထဲ ချောင်းဆိုးပါ သို့မဟုတ် နှာချေပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ရောဂါလက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် သင်သည် စစ်ဆေးမှု ခံယူရမည်။.
ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် စစ်ဆေးမှုမှာ လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းလူထဲတွင် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့် ခိုလှုံဒုက္ခသည်များကဲ့သို့ မက်ဒီကဲကတ်ပြား မရှိသည့်သူများ ပါဝင်သည်။
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်၏ လက်ရှိ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက် အဆင့်များ.
ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေလျှော့ပေးခြင်းအတွက် အစီအစဥ်နှင့် COVID ပုံမှန််အခြေအနေ (COVID Normal) ရရှိရန် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အတွက် အဆင့်ဆင့်လုပ်ရမည့်အချက်များကို (Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening) တွင်ဖော်ပြထားသည်။.
Melbourne မြို့နယ်နိမိတ်အတွက် အစီအစဥ်တစ်ခုနှင့် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် နယ်စွန်ဒေသအတွက် အစီအစဥ် တစ်ခုရှိပါသည်။
ကျန်းမာရေး အရာရှိချုပ် (Chief Health Officer) သည် အကယ်၍ အဆိုပါ အခြေအနေ ပြောင်းလဲလျှင် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒုတိယ အဆင့်- Melbourne မြို့နယ်နိမိတ်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှစ၍ဖြစ်သည်
မြို့နယ်နိမိတ်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီမှစ၍ ညမထွက်ရ အမိန့် မရှိတော့ပါ။
သင်သည် အောက်ပါအကြောင်းရင်းများအနက် တစ်ခုကြောင့် အိမ်မှအပြင် အချိန်မရွေး ထွက်နိုင်သည် -
အစားအစာ သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် အခြား အသုံးအဆောင်အရာများ ဝယ်ယူခြင်း
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (အိမ်ပြင်ပနှင့် အကန့်အသတ်အားဖြင့်)
စာနာထောက်ထားသည့် အကြောင်းရင်းများကြောင့် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးကုမှု ခံယူရန်။
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် အသုံးအဆောင်အရာများ ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် သင်သည် သင့်အိမ်မှ ၅ ကီလိုမီတာအတွင်း နေရမည်။
ဤအချိန်မှ စ၍ _
အိမ်ထောင်စု နှစ်စုမှ လူငါးဦးအထိသည် အိမ်ပြင်ပ၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တွေ့ဆုံနိုင်သည်။
မူကြိုကျောင်းမှ ၆ တန်း၊ VCE/VET/VCAL နှင့် အထူးကျောင်းရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းဖွင့်တန်းကာလ ၄ ၌ အဆင့်ဆင့်စီစဥ်ထားသည့် ကျောင်းပြန်တက်မှုဖြင့် ကျောင်းပြန်တက်ရပါလိမ့်မည်။
ပိုမိုများပြားသည့် အလုပ်လုပ်ရာနေရာများ ပြန်ဖွင့်သည်။
ပြင်ပ ရေကူးကန်များ ပြန်ဖွင့်သည်၊ ရေကူးနည်းပြတစ်ယောက်အတွက် သင်တန်းသား နှစ်ယောက်အထိ သင်တန်းပေးနိုင်သည်။
ပြင်ပ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူစုဝေးပွဲများကို လူ ငါးဦးအထိနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတို့အား ခွင့်ပြုသည်။
ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများကို အိမ်ပြင်ပ၌ လူ ငါးဦးအထိ ခွင့်ပြုသည် (၎င်းတွင် စုံတွဲနှင့် သက်သေနှစ်ဦးပါဝင်သည်)။
အကယ်၍ သင် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် နယ်စွန်ဒေသသို့ တရားဝင် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ခရီးထွက်လျှင် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် ရဲအဖွဲ့မှ သင့်အား ငွေဒဏ် $4,957 အထိ တပ်ရိုက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင်နှင့်အတူ မနေထိုင်သည့် မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစု လူ ငါးဦးထက်ပို၍ ကြီးမားသည့် လူအုပ်စုတွင် အိမ်ပြင်ပ၌ ရှိနေလျှင်လည်း သင်သည် ငွေဒဏ် ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ အကယ်၍ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကဲ့သို့ တရားဝင်သင့်မြတ်သော အကြောင်းရင်းတစ်ရပ် မရှိဘဲ မိတ်ဆွေများ သို့မဟုတ် မိသားစု သင့်အိမ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်လျှင် သင်သည် ငွေဒဏ် ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
တတိယအဆင့် - အကယ်၍ လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်း (ပြည်နယ်-တစ်ခုလုံး) ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရောဂါရှိလူအသစ် (ပြည်နယ်-တစ်ခုလုံး) ငါးဦးထက်နည်းလျှင် ထို့ပြင် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများက သဘောတူလျှင် ဖြစ်သည်။
ဤအချိန်မှ စ၍ -
ညမထွက်ရ အမိန့် မရှိ၊ အိမ်မှအပြင်ထွက်ရန် သို့မဟုတ် သင် သွားနိုင်သည့် အကွာအဝေးတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များ မရှိ။
ပြင်ပနေရာများတွင် လူ ၁၀ ယောက်အထိ စုဝေးနိုင်သည်။
သင်သည် သင့်အိမ်၌ အခြားအိမ်ထောင်စုမှ ဧည့်သည် ငါးဦးအထိလက်ခံ နိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတည်းမှ လူများဖြစ်ရမည်။.
၇ တန်းမှ ၁၀ တန်းရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရောဂါရှိလာသူဦးရေ နိမ့်ကျပြီး ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများက သဘောတူလျှင် ကျောင်းပြန်တက်ကောင်း ပြန်တက်နိုင်သည်။
ဆိုင်များနှင့် ဆံသဆိုင်များ ပြန်ဖွင့်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ကဖီးများမှာ ဆိုင်ပြင်ပ၌ ထိုင်ခုံများချထားပြီး လူ ၁၀ ယောာက် အုပ်စု ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် ပြင်ပ ထိတွေ့မှုမဲ့- အားကစားကို အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပြန်ဖွင့်ခြင်း။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အရွယ်လူများအတွက် ပြင်ပ အားကစားကို ပြန်ဖွင့်သည် (ထိတွေ့မှုနှင့် ထိတွေ့မှုမဲ့)။
နောက်ဆုံးအဆင့် -အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး အကြံဉာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီး အကယ်၍ လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်း ရောဂါရှိလူအသစ် လုံးဝ မရှိသည့်အပြင် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများက သဘောတူလျှင်ဖြစ်သည်။
ပြင်ပနေရာများတွင် လူ အယောက် ၅၀ အထိ စုဝေးနိုင်သည်။
သင်သည် ဧည့်သည် အယောက် ၂၀ အထိ သင့်အိမ်၌ လက်ခံနိုင်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ကဖီးများသည် ၂၀ ယောက် ကန့်သတ်ထားသည့် လူအုပ်စုအတွက် ဆိုင်တွင်းထိုင်ခုံများအပြင် စားသုံးသူ ၅၀ ကန့်သတ်ချက်တို့ဖြင့် ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။
အားကစားကို ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အရေးယူလုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ ပြန်ကစားနိုင်သည်။ အသက်အရွယ် အားလုံးအတွက် ထိတွေ့မှုရှိသော အားကစားများကို ပြန်ကစားနိုင်သည်။
ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများနှင့် အသုဘအခမ်းအနားများကို လူ ၅၀ ယောက်အထိ တက်ရောက်နိုင်သည်။
အများပြည်သူ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဝတ်ပြုမှု ပြန်လုပ်သည်၊ လေးစတုရန်းမီတာ စည်းမျဥ်းအပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်သည်-
COVID Normal - အကယ်၍ ၂၈ ရက်အတွင်း ရောဂါရှိလာသူအသစ် မရှိလျှင်၊ ကူးစက်နေနိုင်သည့် ရောဂါဖြစ်နေသူ (တစ်ပြည်နယ်လုံး) မရှိ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ် မရှိသည့်အပြင် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများက သဘောတူလျှင် ဖြစ်သည်။
ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များကို ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ လျှော့ချသည် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားသည်။
အိမ်မှနေ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူများအတွက် အလုပ်ခွင်နေရာသို့ အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ပြန်ဝင်မှုရှိသည်။
ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများ သို့မဟုတ် အသုဘအခမ်းအနားများအတွက် ကန့်သတ်ချက်များ မရှိပါ။
လူစုလူဝေးများ သို့မဟုတ် အိမ်ရှိဧည့်သည်များအတွက် ကန့်သတ်ချက်များ မရှိပါ။
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် နယ်စွန်၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ည ၁၁.၅၉ နာရီမှ စတင်၍-
အိမ်မှ အပြင်ထွက်ရန် အကြောင်းရင်းများအပေါ် သို့မဟုတ် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် နယ်စွန်တွင် သင် ခရီးထွက်သွားရောက်နိုင်သည့် အကွာအဝေးအပေါ် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များ မရှိပါ။
လူ ၁၀ ဦးအထိ ပြင်ပတွင် စုဝေးနိုင်သည်။
သင်သည် သင့်အိမ်၌ အခြား အိမ်ထောင်စုမှ ဧည့်သည် ငါးဦးအထိ ရှိနေနိုင်သည်။ ဧည့်သည်များမှာ အိမ်ထောင်စု တစ်စုတည်းမှ ဖြစ်ရမည်။ ဤပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း သင့်အိမ်သို့ လာလည်နိုင်သည့် အခြား အိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုသာ သင် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အသက် ၁၂ လအောက် ကလေးငယ်ကို ဧည့်သည် ငါးယောက်စာရင်းတွင် ထည့်ရေတွက်ရန် မလိုပါ။
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ကဖီးများသည် ပြင်ပ ထိုင်ခုံများနှင့် လူ ၁၀ ယောက်အုပ်စုဖြင့် ဖွင့်နိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် ပြင်ပ ထိတွေ့မှုမဲ့- အားကစားကို အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပြန်ဖွင့်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အရွယ်လူများအတွက် ပြင်ပ အားကစားကို ပြန်ဖွင့်သည် (ထိတွေ့မှုနှင့် ထိတွေ့မှုမဲ့)။
နောက်ဆုံးအဆင့် - အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး အကြံဉာဏ်အပေါ်မူတည်ပြီး အကယ်၍ လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်း ရောဂါရှိလူအသစ် (ပြည်နယ်-တစ်ခုလုံး) လုံးဝ မရှိသည့်အပြင် ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြံဉာဏ်အပေါ် မူတည်နေပါသည်။
လူအယောက် ၅၀ အထိ ပြင်ပနေရာများ၌ စုဝေးနိုင်သည်။
သင်သည် သင့်အိမ်၌ ဧည့်သည် ၂၀ ယောက်အထိလက်ခံ နိုင်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ကဖီးများသည် ဆိုင်တွင်း လူအုပ်စု ၂၀ ယောက်အတွက် ထိုင်ခုံများဖြင့်အပြင် စားသုံးသူ စုစုပေါင်း ၅၀ ယောက် ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်နိုင်သည်။
အများပြည်သူ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဝတ်ပြုမှု ပြန်လုပ်သည်၊ လေးစတုရန်း မီတာ စည်းမျဥ်းအပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်သည်- four square metre rule.
COVID Normal - အကယ်၍ ၂၈ ရက်အတွင်း ရောဂါရှိလာသူအသစ် မရှိလျှင်၊ ကူးစက်နေနိုင်သည့် ရောဂါဖြစ်နေသူ (တစ်ပြည်နယ်လုံး) မရှိသည့်အပြင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ် မရှိလျှင်ဖြစ်သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနှင့် ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ပုံ
ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိနေသေးပြီး လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိသားစုများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအား ဘေးကင်းလုံခြုံနေစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အပိုင်းကို လုပ်ရန်လိုသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံနေစေရန် သင် လုပ်နိုင်သည့် ရိုးရိုးစင်းစင်း အရာများ ရှိပါသည် -
သင့်လက်များကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့် အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ ကြာ ဆေးကြောပါ။
တစ်ရှူးထဲ သို့မဟုတ် သင့် တံတောင်ကွေးထဲ ချောင်းဆိုးပါ သို့မဟုတ် နှာချေပါ။
အခြားသူများမှ အနည်းဆုံး ၁.၅ မီတာ စိတ်ချရသည့်အကွာအဝေးတွင် နေပါ။
အကယ်၍ သင် အိမ်မှ အပြင်ထွက်ရမည်ဆိုလျှင် သင့်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကို ဖုံးအုပ်နေသည့် နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ပါ။
သင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ အတွက် သွားပါ။
အကယ်၍ သင် နေထိုင်မကောင်းလျှင် အိမ်၌နေပါ။ မိသားစုထံ အလည်မသွားပါနှင့် သို့မဟုတ် အလုပ်မသွားပါနှင့်။
အကယ်၍ သင့်တွင် ရောဂါလက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် စစ်ဆေးမှုခံယူပြီး ချက်ချင်း အိမ်တန်းပြန်ပါ။
သင် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု အဖြေ စစ်ဆေးနေစဉ် ဝင်ငွေ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင် စိုးရိမ်ပူပန်နေလျှင် သင် ထောက်ပံ့ငွေ ($450 coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment) ကို ရထိုက်နိုင်ကောင်း ရထိုက်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင် ရောဂါရှိကြောင်း ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေထွက်လျှင် သို့မဟုတ် ရောဂါရှိသူနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် အထိအတွေ့ရှိလျှင် သင် $1,500 ထောက်ပံ့ငွေ ရထိုက်ကောင်း ရထိုက်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် တိုက်ရိုက်ဖုန်းလိုင်း 1800 675 398 ကိုဆက်ပါ။ အကယ်၍ သင် စကားပြန်လိုလျှင် သုည (0) ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင် သို့မဟုတ် သင်သိသည့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည် စိတ်သောက ခံစားနေရလျှင် သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ပူနေလျှင် သင် အသက်ကယ်ဖုန်းလိုင်း (Lifeline) ဖုန်း 13 11 14 ကို ခေါ်ပါ သို့မဟုတ် Beyond Blue ဖုန်း 1800 512 348 ကိုခေါ်ပါ။ အကယ်၍ သင် စကားပြန်လိုလျှင် 131 450 ကို ဦးစွာခေါ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် အထီးကျန်နေသည်ဟုခံစားရလျှင်၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) တိုက်ရိုက်ဖုန်းလိုင်း 1800 675 398 ကိုခေါ်နိုင်ပြီး နံပါတ်သုံး (3) ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ သင့်ကို Australian Red Cross မှ စေတနာ့၀န်ထမ်းနှင့်ဆက်သွယ်စေကာဒေသခံကူညီမှု၀န်ထမ်းအဖွဲ့သို့ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
အသက် ၁၂ နှစ် နှင့်အထက် အရွယ် Victoria ပြည်နယ်လူတိုင်း အိမ်မှအပြင်ထွက်သည့်အခါ နှာခေါင်းစည်းကို ဝတ်ရမည်၊ သူတို့တွင် နှာခေါင်းစည်း မဝတ်ရန် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းရှိလျှင်မှ တစ်ပါး ဝတ်ရမည်။ ဥပမာ-
အကယ်၍ သင့်တွင် မျက်နှာပေါ် ပြင်းထန်သည့် အရေပြား ရောဂါအခြေအနေ သို့မဟုတ် အသက်ရှူရန်အခက်အခဲကဲ့သို့ ရောဂါရှိလျှင်
အကယ်၍ သင် ကားအတွင်း၌ တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့် အိမ်ထောင်စုမှ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူဖြစ်စေ ရှိလျှင်
အကယ်၍ သင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေလျှင်၊ သို့သော်လည်း သင် နှာခေါင်းစည်းကို ဆောင်ထားရပါဦးမည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁၁.၅၉ နာရီမှစ၍ သင်သည် နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကို ဖုံးအုပ်နေသည့် မျက်နှာဖုံး သို့မဟုတ် နှာခေါင်းစည်းကို ဝတ်ရမည်။
စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အထိအတွေ့မဲ့ သီးသန်.နေခြင်း
အကယ်၍ သင့်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ရောဂါလက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် သင် စစ်ဆေးမှု ခံယူရမည် ဖြစ်ပြီး သင့်အဖြေ မရမချင်း အိမ်၌နေရမည်။ အလုပ်မသွားပါနှင့် သို့မဟုတ် ဆိုင်များသို့ မသွားပါနှင့်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် ရောဂါလက္ခဏာများမှာ -
ကိုယ်ပူအဖျားတက်ခြင်း၊ ချမ်းဖျားခြင်း သို့မဟုတ် ချွေးထွက်ခြင်း
ခေါင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် လည်ချောင်းနာခြင်း
အနံ့ခံမရခြင်း သို့မဟုတ် အရသာခံမရခြင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) စစ်ဆေးမှုမှာ လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းလူထဲတွင် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့် ခိုလှုံဒုက္ခသည်များကဲ့သို့ မက်ဒီကဲကတ်ပြား မရှိသည့်လူများပါဝင်သည်။
အကယ်၍ သင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ရောဂါရှိကြောင်း ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေထွက်လျှင် သင် သင့်အိမ်၌ အထိအတွေ့မဲ့ သီးသန်.နေရမည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို “သင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု အဖြေထွက်ခဲ့လျှင် လုပ်ရမည့်အရာ (Word)” ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ဂ်ကို ကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ရောဂါရှိသည့်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် အထိအတွေ့ရှိလျှင် သင်သည် ၁၄ ရက် ကိုယ်တိုင်- အထိအတွေ့မဲ့ သီးသန်. နေရမည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို “သင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ရောဂါရှိသည့်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် အထိအတွေ့ရှိလျှင် လုပ်ရမည့်အရာ (Word)” ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ကို ကြည့်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ စာမှတ်စာတမ်းများကို အသုံးပြုပြီး သင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအား အီးမေးလ်၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ မီဒီယာ သို့မဟုတ် အခြား အသိုင်းအဝိုင်း အဆက်အသွယ်ကွန်ခြာများမှတစ်ဆင့် သူတို့အား ဝေမျှပေးကမ်းပါ။
စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အထိအတွေ့မဲ့ အထီးကျန်နေခြင်း
သငည္ကု ိရု ိနာဗု ိင္း ရပ္စေ္ းရာဂါ (COVID-19)းဖစ္ပြာ သူ ႏး င္း အနီ ကပိေးတြ႔ထာ ဖူ ပါသည္ သင္ သိရ နိ ုေးသာ အခ်က္မ်ာ (PDF) - What to do if you've tested positive coronavirus (COVID-19) (PDF)
သငည္ကု ိရု ိနာဗု ိင္း ရပ္စေ္ းရာဂါ (COVID-19)းဖစ္ပြာ သူ ႏး င္း အနီ ကပိေးတြ႔ထာ ဖူ ပါသည္ သင္ သိရ နိ ုေးသာ အခ်က္မ်ာ (Word) - What to do if you've tested positive coronavirus (COVID-19) (Word)
သင္း တြင္ ကု ိရု ိနာဗု ိင္း ရပ္စေ္ းရာဂါ (COVID-19)းဖစ္ပြာ ေးနပါသည္ သင္ သိရ နိ ုေးသာ အခ်က္မ်ာ (PDF) - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (PDF)
သင္း တြင္ ကု ိရု ိနာဗု ိင္း ရပ္စေ္ းရာဂါ (COVID-19)းဖစ္ပြာ ေးနပါသည္ သင္ သိရ နိ ုေးသာ အခ်က္မ်ာ (Word) - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (Word)
ကြော်ညာပို့စ်တာ – စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ – မြန်မာ - Get tested poster (PDF)
လူမှုရေး မီဒီယာ ဒီဇိုင်းပုံရိပ် - အကယ်၍ သင့်တွင် ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခု ရှိလျှင် စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ -မြန်မာ - If you have any symptoms, get tested social media tile (JPG)
Coronavirus (COVID-19) စစ်ဆေးခြင်း - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (Word)
Coronavirus (COVID-19) စစ်ဆေးခြင်း - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (PDF)
သင်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါ Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) (Word)
သင်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါ Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) (PDF)
ကြော်ညာပို့စ်တာ – ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် နေရန် နည်းလမ်း ၃ မျိုး – မြန်မာ -3ways to stay safe poster (PDF)
သင့်လက်များကို ပုံမှန် ဆေးကြောပါ - Poster - Wash your hands regularly
သင့် ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် နှာချေခြင်းတို့ကို ဖုံးအုပ်၍လုပ်ပါ - Poster - Cover your cough and sneeze
$1500 ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေဘး ခြင့္ရက္အတြက္ ေပးေငြ - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (Word)
$1500 ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေဘး ခြင့္ရက္အတြက္ ေပးေငြ - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (PDF)
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းအထုပ္မ်ား - Emergency relief packages fact sheet - (Word)
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းအထုပ္မ်ား - Emergency relief packages fact sheet - (PDF)
အကယ်၍ သင် coronavirus (COVID-19) ကာလအတွင်း မလုံခြုံမှု၊ စိတ်သောက သို့မဟုတ် စိတ်ပူပန်မှု ခံစားရလျှင် အကူအညီကို ရယူပုံ - Emergency support fact sheet - (Word)
အကယ်၍ သင် coronavirus (COVID-19) ကာလအတွင်း မလုံခြုံမှု၊ စိတ်သောက သို့မဟုတ် စိတ်ပူပန်မှု ခံစားရလျှင် အကူအညီကို ရယူပုံ - Emergency support fact sheet - (PDF)
နှာခေါင်းစည်းကို ဝတ်ဆင်ပုံ - How to wearaface mask - Burmese (Word)
နှာခေါင်းစည်းကို ဝတ်ဆင်ပုံ - How to wearaface mask - Burmese (PDF)
အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်ပုံ - Design and preparation of cloth mask – Burmese (PDF)
အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်ပုံ - Design and preparation of cloth mask – Burmese (Word)